NANG KYAR OO (နန်းကြာဦး): ပြုံးပျော်နိုင်စေရန်........
ကျွန်တော်လည်း ကားလိုင်စင် ကိစ္စဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသောကြောင့် ပို့ စ်များ မတင်နိုင်ဖြစ်တာကြာပါပြီ။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် တော်တော်လေးကို စိတ်ညစ်နေလို့ ပါ။ သို့ သော် ကျွန်တော် စိတ်ညစ်နေပေမည့်
ကျွန်တော် ရဲ့ ဘလော့ လာရောက်လည်ပတ်သူအားလုံး ပြုံးပျော်စေချင်တာ ကျွန်တော် ရဲ့ ဆန္ဒပါ ။ထို့ ကြောင့်
ကျွန်တော် အစ်မ (တပေါင်းသီ) ပေးပို့ လာသော ဟာသ လေးများကို လာရောက်လည်ပတ်သူတွေ
ပြုံးပျော်နိုင်အောင်လို့တင်လိုက်ပါတယ် ။
ဆေးရုံတစ်ခု၏ ခန်းမတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဟာ တွန်းလှည်းကုတင်လေးပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေးစောင့်နေရရှာတယ်။သူမဟာ ခွဲစိပ်ကုသခံရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဝတ်အစားမပါ ဗလာကိုယ်တီးနဲ့ ဖြစ်နေလို့စောင်ဖြူပါးလေးနဲ့ ချုံလွားပေးထားကြတယ်။ခဏနေတော့ ဝတ်ရုံအဖြူကြီးဝတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်
အခန်းအတွင်းဝင်လာပြီး...သူမကိုလွားခြုံပေးထားတဲ့ စောင်ပါးလေးကို မ, ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြန်ထွက်သွားတယ်။တစ်ခါ...ခဏနေပြန်တော့ ခုနလူ ဝင်လာပြီး စောင်ကို မ, ကြည့်ပြန်တယ်။ ပြီးတော့
ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြန်ထွက်သွားပြန်တယ်။အဲ...မကြာခင်ဘဲ ခုနလူ တတိယအကြိမ်အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး စောင်ကို မ,
ကြည့်ပြန်တယ်။ဒီတခါတော့ အမျိုးသမီးငယ်က မေးတယ်... ..."ဒေါက်တာ၊ ကျမကို မကြာခင် ခွဲစိပ်ကြတော့မှာ မဟုတ်လား ဟင်..."ဒီတော့...အဲဒီလူက ပြန်ဖြေတယ်... ...
"သိဘူးဗျ...ကျနော်က ဒီဆေးရုံကို ဆေးပြန်သုတ်နေတဲ့ ဆေးသုတ်သမားရယ်" ။ ။ ။
ရုပ်ဆိုးလွန်းလို့ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ရောဂါကုဆေးခန်းတစ်ခုကို ရောက်လာပါတယ်။
အဲဒီကိုရုပ်ဆိုးဟာ သူ့အလှည့်ရောက်တော့ ဆရာဝန်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာရင်းပြောရှာတယ်... ...
"ဒေါက်တာရယ်၊ ကျနော်မှာလေ စိတ်ဓါတ်တွေကျပြီး အလွန်ဘဲ အထီးကျန်ဆန်နေပါတယ်ဗျာ၊
ကျနော့်မှာ သူငယ်ချင်းလည်း တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး၊ ဘယ်သူမှလည်း ကျနော့်အနားကိုမလာချင်ကြဘူး၊
ကျနော့်ကို မြင်ကြတဲ့သူတိုင်း လှောင်ပြောင်ရယ်မောကြတယ်ဆရာ။ကျနော့်ရုပ်ကြီးဆိုးနေတာကို မကယ်နိုင်တော့ဘူးလား ဆရာရယ်..."
"ကယ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျားမျက်နှာကို ဟိုဘက်လှည့်ပြီး ပြောလို့ ရမလား"
ကိုထုံတစ်ယောက် ဈေးရှေ့မှာ စိတ်ညစ်နေတယ်။သူဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုသယ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေလို့ လေ....တောင်းတလုံးရယ်၊ အိမ်သုတ်ဆေးတဂါလံပုံးရယ်၊ ကြက်အရှင် ၂ကောင်နဲ့ ဘဲအရှင်က ၄
"ကျနော်လဲ အိမ်ပြန်မှာ ကျနော်နဲ့လိုက်ခဲ့လေ၊ ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုသယ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေလို့"
"လွယ်လွယ်လေး၊ အိမ်သုတ်ဆေးပုံးကို တောင်းထဲ ထဲ့လိုက်ပြီး ခေါင်းနဲ့ရွက်လိုက်၊ကြက်တကောင်စီကို လက်မောင်းမှာ ချိပ်လိုက်၊ ဘဲ၂ ကောင်ဆီကိုိလက်တဖက်ဆီမှာဆွဲလိုက်"
သူမပြောသလိုလုပ်လိုက်တာ ကိုထုံ တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်။အဲလိုနဲ့ အတူတူလျှောက်လာကြရင်း လမ်းခုလပ် လူပြတ်တဲ့နေရာရောက်တော့ အဲဒီမိန်းမကကိုထုံကို စွပ်စွဲပါတော့တယ်...
"ဗျာ...ကျနော့် ခေါင်းပေါ်မှာ ဆေးပုံးကြီးနဲ့တောင်းကိုရွက်ထားတယ်...လက်မောင်းမှာလဲ ကြက်တွေချိပ်ထားတယ်၊ လက်နှစ်ဖက်မှာလဲ ဘဲတွေဆွဲထားရတယ်၊ ဒီလိုလူက ခင်ဗျားလေးကို ဘယ်လိုလုပ် ဗလက္ကာရကျင့်လို့ရမလဲဗျာ..."
"ဘဲတွေကို အောက်ချလိုက်ပြီး ထွက်မပြေးနိုင်အောင် တောင်းနဲ့ အုပ်လိုက်လေ၊ဆေးပုံးကို တောင်းအပေါ်ကဖိထားလိုက်၊ ကြက်နှစ်ကောင်ကိုတော့ ကျမကိုင်ထားပေးမယ်"....တဲ့။
မုတ်ဆိပ်မွေး ပါးသိုင်းမွေးရိတ်ဖို့ လူတစ်ယောက် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ထဲ ဝင်လာပါတယ်။
သူ့အလှည့်ရောက်တော့ ဆံသဆရာက သူမုတ်ဆိပ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေးတွေကို စ,ရိတ်ပါတယ်..မုတ်ဆိပ်မွေး နဲ့ နုပ်ခမ်းမွေးကို ရိတ်တဲ့အခါ ပြသနာ မရှိပေမဲ့ပါးသိုင်းမွေးရိတ်တော့ နဲနဲ ခက်နေတယ်။
သူ့ပါးကနဲနဲခွက်နေတာကိုး။ဒါနဲ့ ဆံသဆရာက သစ်သားနဲ့ လုပ်ထားနဲ့ အလုံးလေး တလုံးကိုပေးလိုက်ပြီး ပြောတယ်..
..."ဒါလေးကို ခဏငုံထားလိုက်၊ ဒါမှ ပါးသိုင်းမွေး ရိတ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်"..
အဲဒီလူလည်း သဘောကျသွားတယ်၊ ဒီ ဆံသဆရာမဆိုးဘူး တော်တော်ဥာဏ်ပြေးသားဘဲ လို့တွေးနေတယ်။
ညာဘက်ပါးကို ရိတ်တော့ ညာဘက်ပါးစောင်မှာ ငုံလိုက်၊ ဘယ်ဘက်ပါးကို ရိတ်တော့ဘက်ဘက်ပါးစောင်မှာ ငုံလိုက်နဲ့ လုပ်နေရင်း ဆံသဆရာကို လှမ်းနောက်လိုက်တယ်... ...
"ခုလိုငုံထားတုန်း ခင်ဗျားသစ်သားလုံးလေးကိုမျိုချမိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ"
"ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။ နောက်နေ့ 'အီး' ပါရင် ပြန်ထွက်လာမှာဘဲ မဟုတ်လား၊အဲဒီတော့မှရေဆေးပြီး ပြန်လာပေးပေ့ါ၊ တခြားသူတွေလဲ ဒီလိုဘဲပြန်လာပေးနေကျဘဲဟာ"...တဲ့။
* "ရှာဖွေရ မောလှပြီ"*
တနှစ်က မန္တလေးသင်္ကြန်ကို သွားလည်ဖြစ်တယ်။သင်္ကြန်တွင်းလူအစည်ကားဆုံးဖြစ်တဲ့ကျုံးနဲ့အနီးဆုံးဟော်တယ်တစ်ခုမှာ
တည်းခိုဖို့သွားတော့ အခန်းတိုင်း လူပြည့်နေတယ်တဲ့။တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ကောင်တာစာရေးမက ဆက်ပြောလာတယ်...
"အခန်းလွတ်တစ်ခုတော့ ကျန်သေးတယ် ဦး၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအခန်းက အိမ်သာပျက်နေလို့ပြင်နေတာ မပြီးသေးဘူး၊ အများသုံးအိမ်သာမှာ အသုံးပြုပြီးနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဦး နေလို့ရပါတယ်"
ဘယ်မှလည်းထပ်မရှာချင်တော့တာနဲ့ အဲဒီအခန်းကိုဘဲ ယူလိုက်တယ်။မန္တလေးသင်္ကြန်မှာ ပျော်ပါတယ်။
အခန်းပြန်ရောက်လို့ အပေါ့အလေးသွားတဲ့အခါ နည်းနည်းကသီတာကလွဲလို့ကျန်တာအားလုံးအိုကေပါတယ်...
အဲ...မအိုကေတာက ပြန်မယ့်နေကျမှဖြစ်တာ၊ပြန်မယ်ဆိုပြီး ပစ္စည်းတွေထုတ်ပိုးသိမ်းဆည်းပြီးကာမှ ဗိုက်ကရစ်ရစ်ပြီးနာလာတယ်..ဒါနဲ့ အိမ်သာရှိရာ ကမန်းကတန်းပြေးရတာပေ့ါ၊ ကံများမကောင်းချင်တော့ အိမ်သာက
တခန်းမှမအားဘူး။ဟိုတယ်က၂ထပ်ဆိုတော့အောက်ထပ်မှာလဲအများသုံးအိမ်သာရှိတာနဲ့အောက်ထပ်ဆင်းပြေးရပြန်တယ်..အာ..အောက်ထပ်က အိမ်သာတွေမှာလဲ လူအပြည့်..ခက်ပြီ၊ ဒီမှာလဲထွက်ကျတော့မယ်...
ကြံရာမရတဲ့အဆုံး အခန်းကိုဘဲပြန်လာလိုက်တယ်...အခန်းထဲက စာပွဲပေါ်မှာအလှတင်ထားတဲ့ ပန်းအိုးကိုယူလိုက်တယ်၊
ပန်းတွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပန်းအိုးထဲကို ဗိုက်နာတဲ့ကိစ္စရှင်းချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ ပန်းတွေ ပြန်စိုက်ထဲ့လိုက်တယ်။
ခုမှနေသာထိုင်သာရှိတော့တာကိုး...ပြီးတာနဲ့ အိတ်ဆွဲပြီးခပ်တည်တည်နဲ့ ထွက်လာခဲ့တာပေ့ါ။
နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ဟိုတယ်က ပို့လိုက်တဲ့ ပို့စ်ကဒ် တစ်ခု စာတိုက်က
အားလုံးကိုခွင့်လွတ်ပါသည်၊ဘယ်နေရာမှာ ပါခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိပါရစေရှင်"....*တဲ့
* "ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့"*
နှစ်ယောက်စီး ဆက်စနာ ၁၅၂ အမျိုးအစားလေယာဉ်ပျံငယ်လေးတစင်း မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းကမြို့လေးတမြို့ရဲ့ သင်ချိုံင်းကုန်းတခုအတွင်း ပျက်ကျသွားပါတယ်။အထူးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးတပ်စိပ်တစ်စိပ် လွတ်လိုက်ပါတယ်။မကြာမှီမှာဘဲ အထက်လူကြီးများထံ သတင်းပေးပို့ချက်ရောက်လို့ လာပါတော့တယ်...
*" လေယာဉ်ပျက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ၊ သေဆုံးသူရုပ်အလောင်း ၁၅၀ ခန့်တွေ့၊သေဆုံးသူအရေအတွက် ယခုထက်ပိုများနိုင်၊ ဆက်လက်ရှာဖွေတူးဖော်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းပေးပို့အပ်"...*
ရေငုပ်သမားတစ်ဦး ရေငုပ်နေရင်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် ၁၅ပေခန့် အရောက်မှာရေငုပ်ဝတ်စုံမပါတဲ့တခြားလူတစ်ယောက်ကို သူနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ တွေ့လိုက်တယ်။အဲ...သူ ပေ၃၀ ရောက်တော့လဲ ခုနလူကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။တခါ ပေ၄၀ ထိ ဆက်ငုပ်တော့လဲ အဲဒီလူပါလာတုံးဘဲ...ဆိုတော့အံ့သြမှုကိုမထိမ်းနိုင်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ ရေအောက်မှာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Waterproof chalkboard ပေါ်မှာ စာရေပြီးမေးလိုက်တယ်...
ဟိုလူက သူ့ chalkboard ကို ဆွဲယူပြီး စာပြန်ရေးပြတယ်..."ငါက ရေနှစ်နေတာဟ...မအေပေးရ"
အဝေပြေးလမ်းမတစ်ခု အပေါ်မှာဖြစ်သည်။ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဟာ နွားပေါက်စလေးတစ်ကောင်ကို တိုက်မိတဲ့ အတွက်
နွားလေးသေဆုံးသွားပါတယ်။နွားပိုင်ရှင်က ဆိုင်ကယ်သမားဆီမှာ အလျော်တောင်းတယ်... ...
"အခုတော့ ဒေါ်လာ၂၀၀ လောက်ဘဲတန်တယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက် ၆နှစ်ကြာရင် ဒေါ်လာ ၉၀၀လောက်တန်မှာ၊ ဒီတော့ ဒေါ်လာ ၉၀၀ လျော်"
ဆိုပြီး..ဆိုင်ကယ်သမားက ချက်လက်မှတ်တစ်စောင် ရေးပေးတယ်။
"ကဲရော့...ဒီမှာ ဒေါ်လာ ၉၀၀ ချက်လက်မှတ်၊ နောက် ၆နှစ် နေ့စွဲနဲ့ ရေးထားတယ်၊အဲဒီနေ့ရောက်ရင် ထုတ်လို့ရပြီ..."
မိဝေ တစ်ယောက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေ့တွေကို ဖြတ်သန်းနေရတော့ စိတ်ပျက်နေရှာတယ်။သူ့အိမ်ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာခုံပေါ်မှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ သူ့အမေနဲ့မောင်လေးကို တိုင်တည်ပြောပြရင်း ညီးညူနေတယ်... ...
"ဘယ်သူမှ ငါ့ကိုမချစ်ကြဘူး၊ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိသမျှလူတွေကငါ့ကိုမုန်းနေကြပြီထင်တယ်"
ဒီတော့ သူ့အမေက အားပေးတယ်.. ...
သူ့မောင်လေးကလည်း ဝင်ပြီးထောက်ခံရှာတယ်... ...
"ဟုတ်တယ်...မမကို မသိတဲ့လူတွေကတော့ မုန်းမှာမဟုတ်ပါဘူး"...တဲ့။
စစ်သားနှစ်ဦး အားလပ်ချိန်မှာ စကားစမည်ပြောနေကြတယ်။
"မင်း ဘာလို့ စစ်ထဲဝင်တာလဲ"
"ငါ့မှာ မိန်းမလည်း မရှိဘူး၊ တိုက်ရခိုက်ရတာလဲ ဝါသနာပါလို့ စစ်ထဲဝင်တာ၊ မင်းကရော?"
"ငါ့မှာ မိန်းမရှိတယ်လေ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်လို့ စစ်ထဲဝင်တာ"
အိုစမာဘင်လာဒင် အသက်ရှင်လျက်လား၊ ကျဆုံးသွားပြီလားဆိုတာ လူတွေအားလုံး တိတိကျကျမသိကြဘဲ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြဆဲပါ။တနေ့တော့အိုစမာဘင်လာဒင်ကစဉ်းစားတယ်...အမေရိကန်သမ္မတဆီစာတစ်စောင်ရေးပို့မယ်ပေ့ါ။သူကိုယ်တိုင် သူ့လက်ရေးနဲ့ရေးပို့မယ်၊ ဒါမှ သူအသက်ရှင်လျက် ရှိတယ်ဆိုတာသက်သေထင်ရှားမယ်လေ။ ဒါနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဘုရှ် တစ်ယောက် ဘင်လာဒင်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုလက်ခံရရှိတော့ ...ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။
စာက တကြောင်းထဲရယ်... 370HSSV-0773H
စာကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ဂျော့ဘုရှ် အာရုံနောက်သွားတယ်။လျှို့ဝှက်သင်္ကေတနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့ သူ နားမလည်ဘူးလေ။
သူ့ ရုံးအဖွဲမှုးကိုခေါ်ပြီး ဒီစာကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်၊ မပြန်တတ်ဘူး။သူ့ အတွင်းရေးမှုးမတွေကိုခေါ်ပြီး ဒီစာကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်၊ မပြန်တတ်ဘူး။သူ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်ကိုခေါ်ပြီး ဒီစာကိုဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်၊ မပြန်တတ်ဘူး။သူ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုခေါ်ပြီး ဒီစာကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်၊ မပြန်တတ်ဘူး။အဲဒီဝန်ကြီးတွေရဲ့ အတွင်းရေးမှုးမတွေကိုခေါ်ပြီး ဒီစာကို ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်၊မပြန်တတ်ဘူး။အမေရိကန်အမျိုးသား စုံစမ်းရေးဗြူရိုကို ပို့ပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်။ မရပါဘူး။အမေရိကန် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီကို ပို့ပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်၊ ဒါလဲမပြန်တတ်ကြဘူး။ ကြံရာမရတဲ့အဆုံးမှာတော့...အမေရိကန်ရဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကို အကူအညီတောင်းရတော့တယ်။အစ္စရေးက သူ့ ဘဝပေးအခြေအနေရ အာရပ်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူကိုး၊ဘင်လာဒင်ရဲ့အထာကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းတယ်လေ။နောက်ဆုံးအစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ MOSAD က ဘင်လာဒင်ရဲ့ လျှို့ဝှက်စာကိုဖတ်ကြည့်ပြီး အမေရိကန်သမ္မတဆီကို စာပြန်လိုက်တယ်... ...
"သမ္မတကြီးခင်ဗျား....စာကို ဇောက်ထိုးမဖတ်ပါနဲ့ခင်ဗျား"... ...တဲ့။
ကျနော်နဲ့ကျနော့်မိန်းမ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ကို အလည်ရောက်ခဲ့စဉ်ကပေ့ါ။တည်းခိုတဲ့နေရာကလည်း ပဲရစ်မြို့ရဲ့နာမည်ကျော် "ချစ်သူလမ်းကြား" အနီးကဟိုတယ်တစ်ခုမှာလေ။ညနေစောင်းလဲရောက်ရော ကျနော့်ဇာတိက ပြ လာတယ်၊ အဲဒီ "ချစ်သူလမ်းကြား" ထဲကိုသွားကြည့်ချင်တာလေ။ ဝါသနာပါတာကိုး။ဒါနဲ့ မိန်းမကိုလှည့်ပတ်ပြောခဲ့ပြီး သူ့ကို ဟိုတယ်အခန်းမှာ ခဏထားခဲ့လိုက်တယ်၊ပြီးတာနဲ့ ချစ်သူလမ်းကြားတလျှောက် အစုံအဆန်လိုက်ကြည့်မိတယ်... ...အားပါးပါး...မိန်းမလှလေးတွေဗျာ၊ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ၊ တိုက်နံရံဘေးမှာ၊လှေခါးအဆင်းနေရာလေးတွေမှာ...ပေါမှပေါ ချောမှချော။အသားလေးတွေများဝင်းစိုအိဖတ်နေလိုက်တာ..ခြေသလုံးလေးတွေဆိုရင်ပြေးပြေးဟပ်လိုက်ချင်တယ်..တကယ်။မနေနိုင်တာနဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကပ်ပြီး မေးကြည့်လိုက်တယ်... ...
"ရိုးရိုးဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂၀၀၊ အစုံဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂၅၀"
"ဟင်...အဲလောက်တောင် ဈေးကြီးတာလား၊ ငါ က ၂၅ ဒေါ်လာလောက်ဘဲ ထင်နေတာ"
"အဲဒါဆိုရင်တော့ ...ရှင် ဟိုဘက်တစ်လမ်းကျော်ကိုသွား၊ အဲဒီမှာ ၂၅ဒေါ်လာတန်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စုပ်ပြတ်နေတာတွေဘဲ ရမှာနော်"…."အော်...အေးပါကွာ၊ မသွားတော့ပါဘူး၊ ပြန်တော့မယ်"
ဟူး...မလွယ်ဘူး၊ သွားပြီး စပ်စုမိတာ အကောခံလိုက်ရတာ အဖတ်တင်တယ်။ အခန်းပြန်မှ။
ဒါနဲ့ ဟိုတယ်ကိုပြန်၊ ရေမိုးချိုး၊ မိန်းမကို လက်ဆွဲပြီးနှစ်ယောက်သားညစာစားဖို့ လမ်းမအတိုင်း ဆိုင်လိုက်ရှာရွေးနေတုံး...
ကံများဆိုးချင်တော့ ခုနက မိန်းကလေးနဲ့ မျက်နှာခြင်းဆိုင်တိုးပါလေရောဗျာ။
သူကလည်းမှတ်မိတယ်၊ မှတ်မိတာထက်ဆိုးတာက သူ ပြောလိုက်တဲ့ စကားဗျ... ...
"အော်..ခုတော့ ၂၅ ဒေါ်လာတန်ကြီး မ, လာတယ်ပေ့ါလေ၊ ကျမ မပြောဘူးလား၊စုပ်ပြတ်နေတာပါလို့"
လူတစ်ယောက် ဆေးဆိုင်မှာ ဆေးလာဝယ်တယ်.. ..."ဆိုင်ရာနိုက် တအောင်စလောက် ရောင်းပါ"
ဆေးရောင်းသူ လန့်သွားပြီး ပြန်မေးတယ်.. ..
"ဘာ...ဆိုင်ရာနိုက်ဆိုတာ အဆိပ်ဗျ၊ ဆေးစာ မပါဘဲရောင်းလို့ မရဘူး၊ ခင်ဗျားကဘာလုပ်မလို့ လဲ"
"ငါ့ မိန်းမကို အဆိပ်ကျွေးသတ်မလို့"
"ဟာ...ဒီလိုဆို ပိုဆိုးတယ်၊ ရောင်းမပေးနိုင်ပါဘူးဗျာ၊ ခွင့်လွတ်ပါ"
ဒီတော့ ဆေးလာဝယ်သူက သူ့အိပ်ကပ်ထဲက ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ထုတ်ပြတယ်၊
"ဟာ...ဆိုးလိုက်တဲ့ရုပ်ဗျာ၊ ဒီလောက်ရုပ်ဆိုးတာ ကျနော့်တသက် တခါမှ မမြင်ဘူးဘူး၊
Posted by Kosai Wanna at 18:00
မအိမ်သူ4June 2011 at 19:49
ဟာသလေးတွေ သဘောကျစွာဖတ်သွားပါတယ်။ ဘင်လာဒင်ရဲ့ လျှို့ဝှက်စာကို သဘောအကျဆုံးဘဲ။
မေသိမ့်သိမ့် ကျော်4June 2011 at 20:14
လာဖတ်သွားပါတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ ငုံခိုင်းတဲ့အလုံးကို မငုံဖို့ သူ့ကို သတိပေးဦးမှ.... ခိခိ။ ရယ်မောသွားပါတယ်။
jasmine(တောင်ကြီး)5June 2011 at 08:21